This is Kellan's story | Share your Children's story | Children's MN
Waa wiil yar oo ku dhashay wadne nus shaqaynayo, daqiiqad walba maalintii waa u qaali
Marka Willette Whitted ay ku celcelinayso jiradaan khatarta ah oo laga helay wiilkeeda oo ah — dextrocardia situs inversus and hypoplastic left heart syndrome — waxaad ka garan kartaa waayo arag nimadeeda.
Wiilasheeda mataanaha ah waxay dhasheen 2013. Judah wuu caafimaad qabaa, inkasta uu ku dhashay dhicisnimo. Sikastaba ha ahaatee Kellan wuxuu leeyahay wadne nus shaqaynayo waxaana loo yaqaan xaaladiisa (hypoplastic left heart syndrome) xaaladaan, wadnahaan daciifka ah wuxuu ku jiray dhinaca midigta ah ee jirka intuu ku jiri lahaa bidixda (xaga caafimaadka waxaa loogu yeeraa: dextrocardia situs inversus). Waxaan laga aqoon walaalkii.
Jirooyinkiisu waa naadir, nolashana khatar bay ku yihiin. Laakiin dhakhaatiirta Isbitaalka caruurta ee Minnesota rajo ayay galiyeen qoyska.
Jirooyinkiisu waa naadir, nolashana khatar bay ku yihiin. Laakiin dhakhaatiirta Isbitaalka caruurta ee Minnesota rajo ayay galiyeen qoyska. Dhowr bilood jir marka uu ahaa, Kellan wuxuu maray sadexda qaliin kiisii u horeeyay ee wadnaha. “Subixii qaliinka, dhakhtarka wadnaha galaa wuxuu noo dul maray sida wax u dhacayaan,” sida ay xusuusato Willette. “Si tafaftiran ayuu uga jaabay su’aalahayagii oo dhan. Wuxuu noo masawiray wadnihii. Mar walba wuxuu na tusayay in Kellan yahay bukaankiisa.”
Qaliinku wuxuu ahaa mid lagu guulaystay. Laakiin saacado kadib, Kellan wadnaha ayaa istaagay. Dhakhaatiirtii Isbitaalka Caruurtu markiiba waxay bilaabeen ka hor-tag iyaga oo samaynaya wax walba oo suurto gal ah in uu wadnaha yar ee bukaanka oo daciifka ah in uu mar labaad shaqeeyo. Ugu danbayn shaqadoodii waxay khasabtay in ay ku xiraan ECMO, kaasoo ah mashiin adag oo la wareegaya shaqada wadnaha iyo sambabada.
Taasi waxay badbaadisay noloshii Kellan.
Waxaa laga furay ECMO-dii, laakiin markiiba waxaa hortimid dhibaato kale: caabuq ka galay xabadka meeshii laga qalay, taas oo keentay in ay soo galaan dhakhaatiiirta caabuqa ku takhasusay ee Isbitaalka Caruurta. Markiiba waxaa ku bilowday suuxdimo taasoo ay keentay daawada wadnuhu, waxaa kooxdii daryeelka ku biiray dhakhaatiirta neerfayaasha.
Bishii Maarso 2014, Kellan wuxuu maray sadexdii qaliin kiisii labaad, kaas oo la mid ahaa wax mucjiso ah, marka aan tixraacno Willette. Waxayna tiri taas waxaa isku raacay qof walba oo ka mid ah kooxda daryeelka: wuxuu noqday ilmo ka duwan sidii hore qaliinkaa kadib.
Inkasta oo ay caqabaad ka horeeyaan, Kellan aad buu uga helay in uusan isbitaal ku jirin 2019. Waxayna ku korayaan xanaanada ilmaha isaga iyo walaalkiis. Hooyadu waxay tiri labada wiilba waxaa ka dhacay iligii ugu horeeyay oo usbuuc u dhaxeeyo.
Taariikhda nolasha Kellan waxay soo martay wakhtiyo ay suurto galiyeen deeqsiyada tabaruca. Ka bilow qalabka casriga oo nafta badbaadiya, daryeelka mataanka baahidiisa sida cuntada iyo gaadiidka, tabarucu nolasha wuu hagaajiyaa — cimri dherarna wuu keenaa — dadka aduunka ugu cajiibsan.
See Tovin’s story
See Mia’s story
See Tovin’s story See Mia’s story
About Children's and Life Stories